Isayensi Yokuphuza Izinwele Ezimpunga
Umlando namasiko Ukuqanjwa Okudumile
Ubani Owuqeda Ukwelashwa Kwezinwele Ezimpunga?
by UMary Bellis
Imishini emisha ephikisanayo ekugcineni ukuvimbela nokuguqula izinwele ezimhlophe
Ukuphulukiswa kwamanje kwebanga lobuchopho obukhulu kusukela ekuthembiseni ngempela ukuthi uzoba ngamafutha enyoka aphansi. Imikhiqizo nezinqubo eziqondene "zangempela" zisekelwe "kwisayensi yangempela" nophenyo lwakamuva ngezimbangela zezinwele ezimpunga. Ngakho-ke, yamuva, ukuthi ngalokhu kubhala noma yiziphi izixazululo zangempela zokuguqula izinwele ezimhlophe zisalindile, noma kunjalo, ziyiqiniso emisebenzini ezobonisa kubathengi phakathi neminyaka embalwa elandelayo.
Okubangela Izinwele Ezimpunga
I-follicle ngayinye yezinwele inezinhlamvu ezikhiqiza i-pigment okuthiwa i-melanocytes. Njengoba kuhlanganiswa izinwele zezinwele, amangqamuzana e-melanocytes ajobezela i-pigant (melanin) emangqamuzaneni aqukethe i-keratin, izakhiwo zeprotheni ezenza izinwele zethu, izinwele, nezipikili.
Kuzo zonke izinsuku zokuphila kwethu, ama-melanocytes ethu aqhubeka ejoza i- keratin ezinwele zezinwele zethu, okwenzela umbala, kodwa-ke, ngemva kweminyaka ethile yokukhiqiza, ama-melanocytes ethu athola isiteleka ukuze akhulume futhi ayeke ukwenza i-melanin eningi ebangela izinwele ezimpunga, noma ungenzi i-melanin noma yini ebangela izinwele ezimhlophe.
Uma ubuza usosayensi ukuthi kungani lokhu kwenzeka, impendulo evamile esinikezwe ngokuvamile "izakhi zofuzo", ukuthi izakhi zethu zofuzo zilawula ukukhathala okwenziwe ngaphambili kokukwazi ukuguqula izinwele zomuntu ngamunye. Kodwa-ke, kukhona incazelo ejulile mayelana nokuthi kwenzekani lapho izinwele zethu ziba grey noma zimhlophe, futhi ukuqonda isayensi ngemuva kwalokho kuholela ekuveleni okuzoshintsha ukungaqiniseki kokubhekana nokulahleka kombala wezinwele.
Ucwaningo lwe-Cell Stem - Ukuguqula izinwele ezimhlophe
Ngo-2005, ososayensi baseHarvard babenokuqala ukuphakamisa ukuthi ukwehluleka kwama-cell stem cell ukuze kugcinwe ukukhiqizwa kwama-melanocyte kubangele ukukhanda kwezinwele. Babesilungile, kanti abanye ososayensi baye bandisa ucwaningo lwabo.
Incazelo ecacile ye-stem cell iseli elisebenza umsebenzi wokwenza amaseli amaningi.
Ama-stem cells avuselele futhi akhe imizimba yethu. Njengoba kuchaziwe ngenhla kulesi sihloko, izinhlobo ezimbili zokukhiqizwa kwamaseli zenzeka lapho imizimba yethu ikhiqiza izinwele ezingekho grey. Ama-melancytes stem cells akhiqiza umbala wezinwele, namanye ama-stem cells aveza izinwele zezinwele.
Ososayensi baye baphromotha ukukhiqizwa okuhlelekile phakathi kwezinhlobo ezimbili ezahlukene ze-stem cell, futhi bathole iprotheni yokubonisa okuthiwa "Wnt". Cabanga nge-Wnt njengomhlobo womsebenzi womsebenzi owengamele ukwenziwa kwezinwele futhi utshela uhlobo oluhlukile lwe-stem cell ukuthi lusebenza kanjani ngokushesha. I-Wnt inakho konke okwenzayo ukuthi kungani izinwele zethu ziba grey. Lapho ama-melanocytes ethu esuka amangqamuzana engenawo amaprotheni anele ngokwanele, abatholi uphawu lokukhiqiza umbala wezinwele.
UProfesa Mayumi kanye neqembu labacwaningi eNew York University Medical Centre baye baphumelela ukubuyisela umbala wezinwele kumagundane ngokuphatha ama-protein aWnt. U-Mayumi uyaqiniseka ukuthi ucwaningo luzoholela ekuxazululeni izixazululo ezihlobene ne-melanocyte kokubili okungathí sina nokuzicabangela kubantu, kufaka phakathi izifo zesikhumba ezifana ne-melanoma, kanye nezinwele ezimpunga.
Abacwaningi eTokyo University of Science, baye bazama nama-stem cells emzamweni wokubuyisela izinwele futhi abuyisele umbala.
Abacwaningi bafaka igundane le-bald nelinye elingenakubala elingenambala ngama-stem amangqamuzana e-follicles ezinwele ezibukhoma futhi bakwazi ukukhulisa amakhanda amnyama wezinwele kwisayithi yomjovo. Ucwaningo luhloselwe ukuholela ekuxazululeni izixazululo zokubopha kanye nezinwele ezimhlophe kubantu.
Ucwaningo lwe-L'Oreal - Ukuvimbela Izinwele Ezimpunga
Udokotela Bruno Bernard uyinhloko yezinwele zezinwele e-L'Oreal eParis. L'Oreal, inkampani eyaziwa ngezinwele nemikhiqizo yobuhle, njengamanje isekela ucwaningo ngezindlela ezintsha zokuvimbela izinwele kusukela ekuguleni.
UBernard neqembu lakhe bebelokhu befunda amangqamuzana e-melanocyte stem atholakala esikhumbeni sethu okubangela ukwenziwa kwesikhumba. Abacwaningi bafuna ukwazi ukuthi kungani isikhumba sethu singapheli ngeminyaka, kodwa izinwele zethu zisho. Bathola i-enzyme ebizwa nge-TRP-2 ekhona amangqamuzana ethu esikhumba esikhumba kodwa ayitholakali ezinhlathini zethu zezinwele ze-follicle stem.
Bayiqaphele ukuthi i-TRP-2 yasiza ukuvikela amangqamuzana e-melanocyte esikhumbeni emonakalweni, ngakho-ke yasiza lawo maseli aqinile ukuba ahlale isikhathi eside futhi asebenze kangcono. I-enzyme ye-TRP-2 inikeze inzuzo emangqamuzaneni esikhumba ethu amaseli abathintekayo ekukhiqizeni izinwele abanayo.
I-Oreal ihlose ukuvuselela ukwelashwa kwama-topical, njenge-shampoo yezinwele, okuzophindaphinda umphumela we-enzyme ye-TRP-2 futhi unike ama-melanocyte stem amaseli ezinwele zezinwele inzuzo efanayo ukuthi amangqamuzana e-skin stem abe, ngaleyo ndlela avimbele futhi aphuze izinwele ezimpunga okwenzekayo kuqala.
Ukuphela Kwezinwele Ezimpunga
Iningi labo bonke abantu, abangaphezu kwengxenye yesithathu yabantu, bayoba nezinwele ezimhlophe ngesikhathi beneminyaka engamashumi amahlanu. Ngokumangazayo, umuntu oyedwa kwabayishumi abangaphezu kweminyaka engamashumi ayisithupha angenaso izinwele ezimhlophe. Kulabo abangeke bafune ukubukeka, izinwele zezinwele zokumboza i-gray zihlale ziwukuphela kokukhetha, uma ungafaki izigqoko. Kodwa-ke, ngiyanithembisa izimpungushe zesiliva ukuthi ukufa angeke kube yedwa okukhethwa kukho kanye nezinye izindlela ezisebenzayo kuzokwenzeka eminyakeni emihlanu.
Ukudla okunomsoco noma ukudla okuphelile
Umlando we-Crash Test Dummies
Umlando Omfushane We-Tape Tape
Igalari yezithombe - Guinness World Records & Imizamo
I-Wheel namanye amaKlastiki angapheli aphinde ahlaselwa
Izibukeli Zamavidiyo Okukhulu - I-Jumbotron
Umshini Wokuhlanza kanye ne-Textile Revolution
Ukubukeka kobuchwepheshe obu-6 obuguqula ukuxhumana
Ukuqala kwemikhosi yama-Easter
Iyini imiphumela ye-Casimir?
15 Onkulunkulu Nodadekazi baseGibhithe lasendulo
UFrancesco Redi: Umsunguli we-Biology yokuhlola
I-Vermont Technical College - Izibalo ze-SAT, Izindleko Nemininingwane Ye-Admissions
Okwenza Izihlahla ZaseKhisimusi Zizwakala Zihle Kangcono
I-Visa H-2A ehamba phambili e-EU e-agricultura njengamanye amazwe
I-Spleen Yakho Isebenza Kanjani?
NjengoJodi Picoult? Bese uzama Lezi Zincwadi
I-Geography yeGulf of Mexico States
Indlela Yokuthuthukisa I-Smart GMAT Study Plan
Amaqiniso Nge-Tasmanian Tiger
Okufanele Ukwenze Uma Ubona Noma Uzwa Umoya
Ukusebenzisa i-Logger Library - Indlela Yokubhala Imilayezo Ye-Log ku-Ruby
I-Nazareth College Admissions
USamuel L Jackson Uxoxa "Inyoka Yomnyama Omnyama"
Amafilimu Ayingqayizivele Ngempumelelo
Kumelwe Ufunde Uma Uthanda 'UWalden'
Ukuze Ukwazi, Ukuqapha, Ukuthanda, Ukuthula
1953 Corvette: I-Corvette yokuqala yaveliswa
11 Izinto Ongase Ungazazi Ngayo I-Super Bowl
Imiyalo yamaHindu engu-10 yomshado ophumelelayo
Igama Lokuqala, Igama Lokugcina, noma Isihloko?
I-Sugar Iveza Imiphumela Emibi Yendawo
Idlalwa kanjani i-Mississippi Stud